Guardiola waxa uu sheegay in uu faanayo oo uu faraxsan yahay laakiin waxa uu wajahay su’aalo ku saleysan in uu ku guul dareystay Champions League waayihiisa Bayern Munich – Gool FM
Guardiola waxa uu sheegay in uu faanayo oo uu faraxsan yahay laakiin waxa uu wajahay su’aalo ku saleysan in uu ku guul dareystay Champions League waayihiisa Bayern Munich
Kaafi May 4, 2016
(Munich) 04 Maajo 2016. Pep Guardiola waxaa laga cirib tiray Europe kahor kooxdiisa cusub ee Mancehster City kaddib markii ay Bayern Munich ku guul dareysatay in ay gaarto fiinaalaha Champions League habeenkii salaasada.
Guulshii 2-1 ahayd ee ay Atletico Madrid xalay Munich uga gaareen kuma fileyn in kooxda Jarmalka ay ay ku tagaan fiinaalaha.
Taas waxa ay ka dhigan tahay in Guardiola uu ku biiri doono xagaaga City kaddib markii uu saddex sano oo xiriir ah ku haray afar dhamaadka Champions League.
Xabi Alonso ayaa is araga isla simay isaga oo dhaliyey laad xor ah, Thomas Muller ayaa beer dareeyey gool ku laad kahor inta uusan qeybtii dambe Antoine Griezmann helin gool aad muhiim u ahaa .
Robert Lewandowski ayaa hogaanka kulanka dib ugu soo celiyey Bayern Munich walow uu Fernando Torres lumiyey gool ku laad isna, kooxdiisa wey xejisatay natiijadii ay rabtay.
Tababaraha Atletico waxa uu yiri: “Ugu dambeyn waxa ay ahayd sida filim xiiso leh.”
City iyo Real Madrid waxa ay ku lagdami doonaan Bernabeu si ay u garaan Milan oo uu fiinaalaha ka dhacayo 28-ka bishan Maajo.
Mar la weydiiyey in uu hada taageeri doono City waxa uu ku jawaabay: “Haa waa sida ay tahay.”
Tabababaraha Bayern waxa uu yiri kahor kulanka In saxaafada Bayern ay dili karto isaga marka uu afar dhamaadka idlaado laakiin wali qorigiisa qasnadiisa wax baa ku haray.
Guul daradii afar dhamaadka – tiisii saddexaad oo xiriir ah oo uu kala kulmo koox Spanisha – waxa ay la kulan siin doonta bil adag kahor inta uusan aadin Manchester City. Waji geesinimo leh ayuu kula soo baxay Allianz Arena.
“Halkan aad ayaan ugu faraxsanahay. Dabcan hadafkeyga ayuu ahaa in aan ku guuleysto Champions League,” ayuu yiri.
“Waxaan isku daynay wanaageena oo dhan laakiin sanadihii dambe nooma shaqeyn. Waqtigeyga halkan wuu dhamaaday waxa ayna u taal dadka in ay uga fikiraan sida ay rabaan.
“Ugu dambeyn waan ku faraxsanahay wax walba oo ka dhacay Munich. Waxaan sameeyey wax walba oo aan awooday. Nafteyda waxaan siiyey kooxda laga soo bilaabo daqiiqadii ugu horeysay ilaa iyo tii ugu dambeeysay.
“Sii fiican ayaan mararka qaar u dheelnay. Mararka qaarna si wanaagsan uma aynaan ciyaarin. Dadka waxa ay rabaan wey sheegi karaan. Sharaf ayey ii ahayd in aan tababaro ciyaaryahanadan. Dhabtii waan ku raaxeystay halkan. Waxaana hubaa in mustaqbalka Bayern uu wanaagsan yahay marka la eego ciyaaryahanadan.”
Guardiola sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday kooxdii guusha ka qaadatay: “Waxaan jeclaan lahaa in aan u hambalyeeyo Atletico maadaama ay gaareen fiinaalaha,” ayuu hadalkiisa raaciyey.
“Waan ku faraxanahay ciyaaryahanadeyda. Ciyaar wacan ayey ahayd jamaahiirteenana garabkeena ayey ahaayeen. Wax walba oo aan sameyn karno waan la nimi. Kooxdan mustaqbal weyn ayaa ka horeeya ciyaaryahanadan dartood, maskaxiyadana waa mid weyn. Kooxda waxaan u rajeynayaa wanaag.”
Mar la weydiiyey in uu shaqada ku guul dareysatay kaddib markii uu xilka la wareegay kooxda oo ah horyaal Europe oo uu geyn waayey fiinaalaha tartanka, waxa uu yiri: “Olole wanaagsan oo Champions League ayaa na soo maray, hadii aad aragto sidii aan ula ciyaarnay Juventus cajiib ayey ahayd.
“Waan murugeysanahay hadana aad ayaan u faanayaa. Aragtideyda mar walba waa in aan dulaan qaado oo aan ku ciyaaro tayadan laakiin ma aysan suuragalin. Markaa waa taas. Atletico oo fiinaalaha joogta iyo Bayern oo aan tagin.”
TOLOOW MA WADA DHASHEEN: Bal eeg taageere aan laga aqoon Vardy oo dabaal deg la sameynaya Leicester City
DHEGEYSO: Warbixin ku saabsan kulanka caawa ee Real Madrid vs Man City (Tebintii Xaaji)